कागती पानी धेरै नपिउनुहोस्, तपाईंलाई पुर्याउँछ यस्तो हानी जानिराखौ ! – Sanjal Nepal
Homeस्वास्थ्य /जिबनशैलीकागती पानी धेरै नपिउनुहोस्, तपाईंलाई पुर्याउँछ यस्तो हानी जानिराखौ !
February 14, 2021 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 12906
तपाईले आजसम्म कागतीको फाइदा बारे मात्र सुन्नुभएको छ हाेला सायद । कागती वजन (ताैल) कम गर्न मात्र नभएर छालाको हेरचाहको लागि पनि काम आउँछ । तर आज हामी यसको बढी प्रयोगले कस्तो हा नी पुग्छ भन्ने जानकारी दिन्छौं ।
पेट संवेदनशील भएका मानिसले कागती पानीको सेवन गर्न हुन्न । कागति धेरै एसिडिक हुन्छ जसका कारण पीएच लेवल कम हुन्छ । कागतीको प्रयोग धेरैजसो अनुहारको छाला राम्रो बनाउनका लागि पनि गर्ने गरिएको छ । पिम्पल्स, दागहरु हटाउन कागतिको प्रयोग हुने गरेको छ तर यसबाट बेफाइदा पनि हुनसक्छ ।
यदी तपाईको गाला वा अनुहारमा यदी घाउ, चिलाउने लगायतका सम स्या छ भने कागतीको प्रयोग गर्न हुन्न । कागती बढी सेवन गर्दा यसले पेटलाई पनि वेफाइदा पु¥याउँछ । यसको प्रयोगले अल्सर, दातको सम स्या, पेट बिग्रने तथा डिहाइड्रेसनको सम स्या उत्पन्न हुन्छ । यसका साथै पटक पटक पिशास आउने, किड्नीमा सम स्या देखा पर्न सक्छ । धेरै कागती पानीको सेवनले छाति पोल्ने लगायतका समस्या आउँछ । यदी तपाईलाई अल्सर छ भने कागति पानीको प्रयोग नगर्दा फाइदा हुन्छ ।
November 2, 2020 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 13997
April 13, 2021 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 12653
डा. सुमनराज ताम्राकार दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि हामी घरभित्रै बस्न बा-ध्य छौँ । यौ-न पा’र्टनर नहुने व्यक्तिले यौ-नसु-खबाट विमु’ख हुनुपर्ने बा-ध्यता बढ्दो छ । जब-र्जस्ती यौ-न चा-हनालाई दबा-उन खोजेको खण्डमा मान-सिक स’मस्या निम्तिन बेर लाग्दैन
November 26, 2020 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 83945